New San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam neLondon ndege dziri paAir Transat izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » New San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam neLondon ndege dziri paAir Transat izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kanada Breaking News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
New San Francisco, Los Angeles, Miami, Amsterdam neLondon ndege dziri paAir Transat izvozvi.
Nekuongorora mafambiro, zviri pachena kuti United States ichiri imwe yenzvimbo dzepamusoro dzeQuebecers neCanada mukumuka kwedenda.
Air Transat inowedzera chirongwa chayo cheUnited States nenzvimbo mbiri nyowani, Los Angeles neSan Francisco, pamwe nendege dzegore rose kuenda kuFlorida.
Air Transat inozivisa basa risingamire pakati peMontreal - Amsterdam neQuebec City - London.
Iyo ndege yeMontreal - Amsterdam ichamhanya katatu pasvondo uye Quebec City - London ndege, kamwe chete pasvondo.
Air Transat yakazivisa kuti nzira ina nyowani dzichawedzerwa kune yayo 2022 zhizha chirongwa chekubhururuka. Kekutanga, ndege ichange ichishandira San Francisco, Los Angeles neAmsterdam airports kubva kuMontreal. Uyezve, ichapa yakasarudzika yakananga ndege pakati peQuebec City neLondon, ichisimbisa basa rayo seanotungamira ekutakura nyika kubva kuJean-Lesage Airport. Pakupedzisira, Air Transat ichashanda nzira dzekuenda kuFort Lauderdale neMiami gore rose.
"Nekuongorora mafambiro, zviri pachena kuti United States ichiri imwe yenzvimbo dzepamusoro dzeQuebecers neCanada mukumuka kwedenda. Nekuda kwekusiyana-siyana kwezvikepe zvedu zvepasi rose, takanyatso kugadzikana kuti tisangane nechido ichi uye nekukasira kujairana nezvinodiwa nevatakuri vedu, ndosaka basa redu rekumaodzanyemba kwemuganhu richange richikura kutanga muna 2022, "anotsanangura Annick Guérard, Mutungamiri. uye Chief Executive Officer pa Air Transat.
Air Transat iri kusimudzira chirongwa chayo chendege cheUnited States nekuwedzera kweCalifornia. Ndege yeMontreal - San Francisco ichashandiswa kaviri pasvondo, ukuwo ndege yeMontreal - Los Angeles ichimhanya katatu pasvondo.
Nekuda kwekuramba kuri kudiwa kwendege kuenda Florida, dzimwe nzira dzaimbowanikwa munguva yechando chete dzava kupiwa gore rose. Munguva yezhizha, ndege yeMontreal - Miami ichashandiswa katatu pasvondo uye Quebec City - Fort Lauderdale ndege, kamwe chete pavhiki.
Panguva imwecheteyo, mutakuri ari kuwedzera basa rayo kuEurope nekuwedzera basa rakananga kune zvikamu zviviri, Netherlands neUnited Kingdom, zvichiita kuti Air Transat ndiyo chete ndege yeCanada ibhururuke yakananga kubva kuMontreal kuenda kuguta guru reDutch.